Adobe SiteCatalyst miyuu luminayaa uumiga? | Martech Zone
Adobe SiteCatalyst miyuu luminayaa uumiga?
Talaado, Oktoobar 2, 2012 Khamiista, Febraayo 25, 2016 Douglas Karr
Waxaan ku helnay dhowr macaamiil ah Adobe SiteCatalyst… laakiin ma hubo in intee badan ay jaceyl u qabaan barmaamijka iyo inta qorshe ah ee ku saabsan sidii loo ilaalin lahaa. SiteCatalyst, sida kuwa kale Analytics barxadaha, xaddid tirada booqashooyinka ay ku kaydin doonaan xogta - faa'iido darro weyn ayey u tahay qof kasta oo qufacaya lacagta badan ee nidaamka ganacsiga. Oo tan iyo markii Adobe liqay iyaga, waxay umuuqataa inaysan isku shirkad ahayn.
Waxaan xiiseynayay arrintan waxaanan eegay qaar ka mid ah isbeddellada raadinta. Maaddaama rajooyinka iyo adeegsadayaashu ay adeegsadaan barxad, waxay u muuqdaan inay in badan iyaga raadiyaan. Xaaladdan oo kale, Raadinta Goobta iyo raadinta Omniture waxay umuuqdaan inay hoos usocdaan. Shaki kuma jiro in Google Analytics ay ruugayso dhammaan iibiyeyaashan - laakiin Omniture wuu ka duwanaa in muddo ah. Shaqaalahooda xirfadeed waxay uqalmeen maalgashiga tan iyo markii ay sii wadeen inay ka caawiyaan macaamiishooda inay koraan. Ma hubo in taasi mar dambe dhaceyso.
La-taliyayaasha agnostic-ka iibiyeyaasha sida aniga oo kale ayaa laga yaabaa inaanay caawin, sidoo kale. Waxba igama gelin la shaqeynta SiteCatalyst, laakiin macaamiisha aan hayno runti wax wax cajaa'ib leh ku sameeyaa ma jiraan. ChaCha waxay ku sameysay xoogaa falanqeyn quruxsan oo ku saabsan aagga bogga si ay u ogaadaan waxa ku jira soo jiidashada iyo haynta martida ugu badan… laakiin xitaa taasi waa lagu sameyn karaa Google haddii loo baahdo.
SiteCatalyst wuxuu bixiyaa xoogaa moobil adag, is dhexgal bulsho iyo fiidiyoow ah… laakiin taasi runti maahan kala duwanaansho sidoo kale. Muuqaalka kaliya ee SiteCatalyst loo arki karo inuu yahay beddel ciyaarta ayaa ah qulqulka shaqada:
Isdhexgalka isticmaalaha dareenka - Muuji fikradaha suuqgeynta tooska ah ee internetka si deg deg ah oo fudud.
Helitaanka waqtiga-dhabta ah — Ka hel xogta laga helo ipadkaaga. Wareeg, mari, oo dhaweyso xilliyada gaarka ah. Kudar cabbiraad cusub ama warbixinno emayl ah taabasho fudud.
Go'aanada otomaatiga ah — U samee ogeysiinta otomaatigga ah ee kicinta dhacdooyinka marka cabbiraadaha muhiimka ahi ka bataan ama ka hooseeyaan filashooyinka
Maxay kula tahay Ma waxaad ahayd shirkad ka tagtay Adobe SiteCatalyst? Falanqaynta ma tahay wax aad mar dambe maal gasho? Fikradayda, way ka yartahay barxadda iyo in badan oo ku saabsan shirkadda kaa caawineysa inaad guuleysato. Aniga oo toos ulashaqeeya dadka kuxiran Webtrends, waan ogahay inta ay daneeyaan macaamiishooda. La shaqeynta macaamiisha SiteCatalyst, ma hubo inaan waligay lahadlay maareeyaha koontada Adobe!
Tags: adobeAdobe sitecatalystxoog -saaridkhabiir ku ah bogga
Ka taxaddar inaad buuxiso qoraallo badan oo falanqeyn Google ah
Dayactirka Computerka Portland
Oktoobar 2, 2012 at 2:12 PM
Daacad ayaan noqon doonaa, waxaan u maleynayaa in Adobe uu luminayo dhul badan sababo la xiriira arrimaha Adobe Flash. In kasta oo aan ogahay in degellada internet ka ay ka guurayaan tan, weli waxaa jira kuwo aad u tiro badan oo ay tahay in ay qabsadaan. Waxaad leedahay isticmaaleyaal badan oo jahwareersan halkaas. In kasta oo xirmooyinka naqshadeynta ay fiican yihiin… qaadista waxaan dareemay inay saameyn ku yeelaneyso xaaladda
Oktoobar 16, 2012 at 7:03 AM
Taasi waa isbeddel si fiican loo arkay hubaal. At LVMetrics, waxaan si ballaaran ula shaqeynaa macaamiisha kuwaas oo si sii kordheysa u ogaanaya suurtagalnimada Google Analytics markii la geeyo oo si habboon loo isticmaalo. Sababtu xitaa kuma saabsana qiimaha mar dambe, waxay umuuqataa inay tahay garasho inay jirto macluumaad aad u tiro badan oo si macno leh looga cuni karo aaladda Webka Falanqaynta taasna, Google Analytics waxay u shaqaysaa si fiican. Codsiyada Awoodda leh waxaa lagu dhisi karaa iyadoo la adeegsanayo Google Analytics API oo ay ku jiraan falanqaynta heerka booqdayaasha - waa wax ay Omniture muddo dheer ku tilmaamaysay inay tahay barta iibinta gaarka ah. Xulashadu runti waxay ku egtahay isbarbardhiga u dhexeeya sifooyinka 'sanduuqa' ee SC, iyo raadinta GA ee xaddidan + xoogaa la-talin, sixir xogta iyo ETL. Dambe wuxuu ku guuleystaa hawlgalin.